Khulisa kuvulandi wakho bese uthola ukuthi ungakusebenzisa kanjani | Bezzia
USusana Garcia | | Ikhaya
Si sihlala efulethini elisendaweni yasedolobheni mhlawumbe sesikushiye phansi ukuthola indawo yokulima. Kodwa-ke, namuhla kubaluleke kakhulu ukuhola indlela yokuphila eqhubeka ngokwendalo nenenhlonipho ngemvelo. Kungakho abantu abaningi banquma ukukhula emakhaya, endaweni yethala, ekhishini noma kuvulandi, ezindaweni ezincane ezingasetshenziswa.
Ake sibone ezinye imibono yokukhula kuvulandi wendlu yethu. Esikhaleni esincane singenza isivuno esibalulekile ngamakhambi athile nezitshalo zalezo zinto esizithanda kakhulu. Akuyona ingadi enkulu kepha ungasizakala ngaso sonke isikhathi. Ngaphezu kwalokho, luhlobo lokuzilibazisa olungasijabulisa kakhulu.
1 Nquma ukuthi uzotshala yini noma cha
2 Khetha iziqukathi
3 Yini ongayitshala kubhalkhoni
4 Sebenzisa i-substrate enhle
5 Thobela imvamisa yokunisela
Nquma ukuthi uzotshala yini noma cha
Kubalulekile ukuthi kucace bha uma sifuna kuvulandi wethu njengendawo yokuzilibazisa noma uma kuyindawo enhle yokutshala. Kunama-balcony abheke enyakatho futhi anokukhanya okuncane, noma abheke eningizimu nasehlobo anokukhanya okuningi kakhulu futhi angashisa izitshalo. Ngakolunye uhlangothi, kuvulandi obheke empumalanga nasentshonalanga yibo abahamba phambili, njengoba benokukhanya okulungile nje. Enye into okufanele siyicabangele ukuthi ukutshala kufanele sibe nokubekezela okuthile, ukubekezela futhi ngaphezu kwakho konke ukunakekela okuthile.
Iziqukathi esizisebenzisayo zingahluka kakhulu. Kusuka emabhokisini enkuni kuya ezimbizeni zezimbali nokunye okwenziwe kabusha njengama-pallets aphenduke abahleli be-balcony abakhulu. Ungathenga izimbiza zezimbali noma uzivuselele kabusha, ngakho-ke unamathuba amaningi. Kufanele ngaso sonke isikhathi uvumelane nendawo onayo kuvulandi wakho, ukuze ukwazi ukuba nengadi ozizwa ukhululekile ngayo. Kala kuvulandi bese uhlela izindawo lapho uzobeka khona amabhodwe. Izingadi eziqondile zimi kahle ngoba azithathi indawo yaphansi futhi singabeka izimbiza eziningi ezilenga. Ungafaka futhi ukulengiswa kothile ngezinto ezidinga isisindo esincane.
Yini ongayitshala kubhalkhoni
Azikho izinto eziningi kangako zingatshalwa kuvulandi ngenxa yezinkinga zesikhala. Uma kuyibhalkoni elincane, kufanele sizilinganisele ezintweni ezithile njengezitshalo ezinamakha esizisebenzisa ekhishini. Iparsley noma i-rosemary yizitshalo ezingaba khona ezimbizeni futhi zitshalwe unyaka wonke. Ngakolunye uhlangothi, kujwayelekile ukuthi abanye abantu batshale isitshalo setamatisi, ikakhulukazi utamatisi wama-cherry, ngoba naso sithatha isikhala esincane futhi imvamisa sikhiqiza utamatisi ehlobo ngokushesha futhi kalula. Omunye umqondo ukudala izimbiza zezitshalo, isibonelo ulethisi, yize lokhu kudinga isikhala ukuze zikhule.
Sebenzisa i-substrate enhle
Uma ufuna ukuthi izitshalo zakho zikhiqize okuthile, akumele zenziwe kuphela banesikhala, amanzi alula futhi ahlala njalo, kepha futhi kufanele sisebenzise i-substrate enhle. Njengoba umhlabathi ucebile ngomsoco, izitshalo zingakhula ngoba zinendlela yokuzondla. Kufanele usebenzise inhlabathi enhle futhi ungeze izakhi zomzimba uma kunesidingo. Thola izeluleko esitolo sezitshalo ukuze zikutshele ukuthi yisiphi esingahle sibe ngcono ezitshalweni zakho. Yilapho kuphela lapho uzobona khona imiphumela emihle.
Thobela imvamisa yokunisela
Uma kufanele babe nezitshalo, kungamanzi. Yebo unendawo yokuhambisa amanzi kuvulandi kuzoba mnandi kakhulu. Kepha noma kunjalo, njengoba kuyinsimu encane, ungawanisela ngebhodlela kuphela noma ngekani elihle lokunisela. Kubalulekile ukwazi ukuthi izitshalo zakho zidinga amanzi angakanani nokuthi kufanele uzinisele kangaki. Uma kungenzeka, faka isexwayiso kuselula yakho ukuze ungakhohlwa ukukwenza. Kungaguquguquki okuhle nokunakekelwa kuphela lapho ingadi ingavela kuvulandi wethu.
Indlela ephelele ye-athikili: Bezzia » Ikhaya » Khulisa kuvulandi wakho, wakhe ingadi yasemadolobheni
Izimvukuzane ebusweni: Konke odinga ukukwazi